Duulimaadyo rakhiis ah, ku iibso tikidhada qiimaha ugu fiican! ?
Soo hel qiimaha ugu fiican duullimaadyada iyo dhammaan dammaanadaha mahadsanid matoorka raadinta duulimaadyada raqiiska ah.
Raadinta Duulimaadyada Jaban
Laakiin waxaa jira xulashooyin kale oo internetka ah, sidaa darteed waxaan kuu soo bandhigeynaa marinka ugu weyn ee raadinta duulimaadka iyo websaydhka isbarbardhiga:
Destinia: Thanks to aaladdan raadinta waxaan ku heli karnaa duulimaadyo qiimo wanaagsan iyo dammaanad buuxda. Halkan guji
Duulimaadyada: Mashiinka caanka ah ee raadinta hudheelku wuxuu kaloo ku siinayaa qalab aad ku hesho duulimaadyo aad u jaban. Halkan guji.
Skyscanner: Mid ka mid ah matoorada baaritaanka ee aadka loo isticmaalay oo sumcad fiican ku leh helitaanka qiimaha ugu jaban. Hadaad rabto inaad aragto sida ay ushaqeyso waa inaad kaliya halkan guji.
Lufthansa, diyaarad Jarmal ah waana tan ugu weyn Yurub. Boggeeda internetka waxaad ka heli kartaa duulimaadyada ugu fiican dalabkooda weyn. Halkan guji.
eDreams, mid ka mid ah wakaaladaha safarka ugu waaweyn adduunka isla markaana bixiya duulimaadyo kala duwan oo kala duwan qiimaha ugu fiican. Diyaarso duulimaadkaaga iyaga halkaan galaya.
Markasta oo maalmo fasax ah ama fasaxa soo dhawaadaan, waxay nagu dhacdaa inaan ka baxno howsha. Maxay ka fiican tahay inaad barato meelaha kale. Haddii sanado badan ka hor aan caajis ahayn, sababtoo ah inaan safar dheer oo dhowr maalmood ah qaadno, maanta taasi dib dambe uma dhacayso. Waad ku mahadsan tahay diyaaradda, waxaan joogi doonnaa meeshii aan u socono waqti aan waqti lahayn. Haddii faa'iidadan weyn aan ku darno duullimaadyo raqiis ah in aan ka heli karno shabakadda, waxaan horey u heli doonnaa qayb ka mid ah ciidaheena abaabulan.
Tilmaamaha ugu sareeya ee raadinta duulimaadyada rakhiis ah
Noqo dabacsanaan: Mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican markay tahay helitaanka heshiisyada duulimaadka, waa marka aynaan cayiman taariikh gaar ah. Taasi waa, waxaan wada ognahay in xilliga sare uu la xiriiro bisha Ogosto iyo ciidaha qaranka. Sidaa darteed, haddii aad nasiib u leedahay inaad ka baxsan karto iyaga dibedda, markaa hubaal waxaad badbaadin doontaa wax ka badan inta aad uga malaynayso tikidka diyaaraddaada.
Tigidhada si gooni gooni ah: Mararka qaar, jartaan tigidh Dib u noqoshada iyo horay u socodka ma ahan xalka ugu fiican. Waxaan heli doonnaa keyd marka aan tikidhada si gooni gooni ah u dhiganno. Dabcan, ugu horreyntii waxaad u baahan doontaa inaad si dhow u eegto, maxaa yeelay shirkadaha oo dhami ma laha khiyaanadan.
MiisaannadaIn kasta oo ay safarada Waxay noqon karaan dhibaato weyn, xaaladdan, waxay xitaa noqon karaan badbaadadeenna. Tani waa sababta oo ah qiimaheeda si weyn ayaa loo dhimay.
Saacadaha: Shaki la'aan, saacadaha sidoo kale waxay saameyn ku yeelan karaan jeebkeena. Haddii aadan ku degdegin maalin cayiman, hubaal waqtigu sidoo kale caqabad kuma noqon doono. Marka, waad keydin kartaa taada duulimaadyada qiimaha jaban haddii aad doorato waxa ugu horreeya subaxa ama habeenkii. Mararka qaarkood waxay dhacdaa in qiimayaashu ay waxyar ka hooseeyaan. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso!
Janaayo, Febraayo iyo Nofeembar waxay noqdeen bilooyin ka raqiisan safarka. Marka, waxaad had iyo jeer tagi kartaa inaad fiiriso maalintooda oo aad boos ka dhigato waqtigaas. Dabcan, haddii aad leedahay maalmo fasax ah, waxaad had iyo jeer wax ka beddeli kartaa xoogaa fasax ah oo aad maskaxda ku hayso.
Sida loo ballansado duulimaad khadka tooska ah
Diyaarso duulimaad khadka tooska ah, Waa mid ka mid ah shaqooyinka uu qof walba qaban karo, xitaa isagoon fikrad badan ka haysan internetka. Intaas waxaa sii dheer, waad keydin kartaa dhex dhexaadiyaasha, sugitaanka iyo habab kale. Miyaanay kula ahayn inay u qalanto?
Marka ugu horeysa, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno waa inaan tagno a duulimaad raadiyaha sida kuwa aan kaaga tagnay bilowga maqaalkan. Halkaas ayaan ku dooran karnaa taariikhda iyo goobta aan dooneyno inaan booqano waxaanan ka heli doonnaa fursado taxane ah, oo lagu dalbaday qiimahooda iyo shirkadaha duulimaadyada. Hawl aad u fudud oo inagu soo food leh ilbidhiqsiyo gudahood.
Mashiinnada raadinta waxaad u isticmaali kartaa labadaba Skyscanner iyo Rumbo ama Destinia, iyo kuwo kale. Dhammaantood way kuu fududeyn doonaan qiimaha ugu fiican ee shirkadaha ugu caansan. Waxaad ku jirtaa gacmo wanaagsan !.
Mar alla markii aan xulnay, layliga fudud ee ogaanshaha ayaa bilaabmaya goorma ayaynu ballansanaynaa. Maaddaama aan qorsheyneyno fasax, ma awoodno inaan nimaadno oo aan fuulno. Maya, maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan wax ka beddelno qiimaha xoogaa. Si tan loo sameeyo, waxa ay tahay inaad ogaato ayaa ah, sida caadiga ah, illaa toddobo toddobaad kahor qiimaha tikidhada ayaa ku dhowaad 10% ka jaban. Dabcan, haddii aan degdeg ku jirno, waa inaad ogaataa in tikidhka isla maalinta bixitaanka laga yaabo inuu ku kordhay qiimaha ilaa 30% ka badan.
Markaad qaaddo talaabooyinka ugu muhiimsan ee raadinta, xulashada iyo xulashada meesha aad u socoto. Hadda waxaa haray oo keliya in la sii qabsado lafteeda. Marka la sameeyo, waxay kuugu soo diri doonaan emayl xaqiijin ah boostada aad bixisay. Lambarkaaga tigidhka iyo lambarkaaga boos celinta ayaa halkaas ka muuqan doona.
Maxay yihiin faa iidooyinka laga helo tikidhka duulimaadka khadka tooska ah?
Waan ognahay inay jiraan kuwo badan Faa'iidooyinka aad u leedahay inaad ballansato duulimaad khadka tooska ah. Shaki la'aan, raaxadu waa shay had iyo jeer nala socon doona. Maaha wax la mid ah inaad u tagto hay'ad oo aad halkaas oo dhan subax ku qaadato, marka loo eego inaad ku raaxeysato sariirta guriga. Dabcan, intaas waxaa sii dheer, waxaan haynaa kuwa kale oo ay tahay in la xuso.
MacluumaadkaDabcan, macluumaadku aad buu u ballaadhan yahay. Tani waa sababta oo ah mahadsanid matoorada raadinta waad awoodi doontaa barbardhig shirkadaha kala duwan, iyo sidoo kale ku raaxeysiga meelo badan iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Jadwal ma laha: Ha ka welwelin haddii aad maalintii oo dhan shaqeyso iyo markii aad timaaddo, the wakaaladda safarka wuu xidhan yahay. Neefso, xoogaa naso, oo shid kumbuyuutarka. Halkaas waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad raadineyso. Waad nuqul ka sameysan kartaa ama dib u eegi kartaa maalinta xigta haddii aad rabto inaad aragti cusub ka qaadato.
Qiimaha: Sidaan faallooyinka u bixin jirnay, wax walwal walwal nagu haya waa qiimaha. Xaaladdan oo kale, ma jiri doonaan dhexdhexaadiyeyaal mar walbana waan la kulmi karnaa kuwaas in ka badan dalabyo waxtar leh. Dabcan, xusuusnow inaad had iyo jeer hubiso qiimaha ugu dambeeya, marka dhammaan khidmadaha u dhigma lagu daro. Xitaa sidaas, waxay hubaal ahaan doontaa inay ka jaban tahay khadka tooska ah.
Meelaha muhiimka ah
Duulimaadyo jaban oo taga London
Haddii aad rabto u safri LondonMarkaa waa inaad ogaataa in si aad u hesho duulimaadyo raqiis ah, waa inaad sameysid boos celin 20 toddobaad ka hor safarka. Tan, waxaad ku badbaadin kartaa XNUMX% qiimaha. Dabcan, tan awgeed, waxaan had iyo jeer kugula talineynaa inaad bilowdo inaad eegto sida ugu dhakhsaha badan ugana sarreyso, inaad isbarbar dhigto. Safarada ugu raqiisan diyaaraduhu waa Maajo iyo Sebtember.
Duulimaadyo jaban oo tagaya Paris
Haddii aad dooratay jacayl, markaa markaa Paris noqo meesha kuugu fiican. Meel aad u socoto oo aad ka ogaan karto meelo soo jiidasho leh. Si aad had iyo jeer u xusuusato iyaga oo aadan u xusuusan, maxaa yeelay waxay ahayd duulimaad qaali ah, markaa waxaad bilaabi kartaa inaad sii qabsato ilaa 10 toddobaad ka hor safarkaaga. Bilaha ugu wanaagsan ee lagu arko Paris waa bilaha Sebtember iyo Oktoobar.
Duulimaadyo jaban oo taga Rome
Haddii aad rabto booqo RomeSidoo kale waa inaad jartaan tikidhkaaga diyaaradda bil iyo badh ka hor. Qaabkan waxaad ku heli doontaa qiimo jaban. Sidoo kale, xusuusnow in Maajo iyo Juun ay yihiin bilooyin hagaagsan, oo leh baahi hoose.
Duulimaadyada Dhaqaalaha ee Madrid
Raadi a duulimaadka Madrid waa wax aad u caan ah oo fudud. Dhammaan garoomada diyaaradaha ayaa ku xiran. Marka, hubaal waxaad xitaa awoodi doontaa inaad ogaato dhowr iyo waqtiyo aad u kala duwan. Waxaa ugufiican in laga fogaado saacadaha iyo maalmaha ugu muhiimsan sida Jimcaha ama Isniinta maxaa yeelay qiimayaashu waa hubaal inay cirka isku shareerayaan.
Duulimaadyada qiimaha jaban ee Barcelona
La Barcelona sidoo kale waa mid si fiican isugu xidhan. Labaduba waxay leeyihiin duulimaadyo qaran iyo kuwa caalami ah. Marka u safriddeeda dhib ma leh. Mararka qaar waxaad heli doontaa safarro qaarkood iyo meelaha ay istaagayaan, laakiin marwalba way wanaagsan tahay inaad ka faa'iideysato fursadda si aad u aragto haddii aan dhowr karo euro. Xullo wakhti ay jiraan qulqulatooyin aad u yar waxaadna arki doontaa sida ay uga raqiisan tahay intaad u malaynayso.